रास्ट्रिय खबर – Page4– shubhabihani
Home / रास्ट्रिय खबर (page 4)	रास्ट्रिय खबर	३३ किलो सुन तस्करीका यी हुन् भूमिगत ‘बादशाह’, खुल्दैछ गोप्य रहस्य
432 Views काठमाडौं, २८ पुस । भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका बन्द भएपछि नेपाली कारोबारीहरुका लागि सुन तस्करीको नयाँ रुट रसुवाको केरुङ र भुटान बन्न पुगेको छ । तस्करहरुले रुट परिवर्तन गरेकाले तातोपानीबाट सुन तस्करी गर्ने समूह केरुङ नाकातिर लागेको हो ।
सुन तस्करले सीमा सुरक्षामा खटिएका चारओटै सुरक्षा निकायलाई छक्याएर काठमाडौंसम्म सुन ल्याउन सफल हुनु सामान्य मानिदैन । दुई साता अघि केरुङ नाकाबाट विभिन्न सुरक्षा घेरा पार गर्दै काठमाडौंको कलंकी आइपुगेको हाइलक्स गाडिबाट अपराध महाशाखाले सात किलो सुन बरामद् गर्‍यो । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
केही महिना अघि मात्रै रसुवाको टिमुरेमा कुङजाङ तामाङको साथबाट ६ किलो अवैध रुपमा तस्करी भैरहेको सुन बरामद भयो ।
काठमाडौंको जोरपाटीमा मध्यरातमा मोटरसाइकलबाटै प्रहरीले १० किलो सुन बरामद गरेको थियो । सुन बोकेर आउने २ जना फरार भए पनि प्रहरीले मोटरसाइकलको एयर फिल्टरबाट १० किलो सुन बरामद गरेको थियो ।
उक्त सुन पनि रसुवाकै रुटबाट काठमाडौं भित्रिएको प्रहरीको निष्कर्ष छ । तर, दैनिकजसो रसुवा नाकाबाट ५० किलो सुन काठमाडौं भित्रिएको भए पनि सेटिङ विग्रिएको बेलामा मात्र प्रहरीले बरामद गर्दै आएको छ ।
तातोपानी नाकामा रक्तचन्दन देखि सुनको अवैध कारोबार गर्ने पुरानै गिरोह यतिबेला भूमिगत रुपमा रसुवा नाकामा सक्रिय भई भरिया लगाएर काम गर्दै आएको छ । अमेरिकी डलर अपचलन गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका सिन्धुपाल्चोक फुल्पिङकट्टिका नारायण पौडेलले ठूलो रकम बुझाई अदालबाट छुटेपछि छुट्टै समूह बनाई सुन तस्करीलाई पेशा नै बनाएका छन् ।
उनी पुराना चन्दन तस्कर हुन् । चन्दनको कारोबारमा टाट पल्टेर धेरैले कारोबार छाडेपनि पौडेल भने यतिबेला सुन तस्करीमा लागेका छन् ।
न तस्करीमा उनका भतिजा सुमन पौडेलदेखि बच्चु पौडेल, प्रदीप सरिया, गोविन्द सरिया, मिनबहादुर श्रेष्ठ र आत्माराम श्रेष्ठसमेतको संलग्नता रहँदै आएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो(सिआईवी) ले यि व्यक्तिहरुमाथि गोप्य रुपमा अनुसन्धान थाल्ने हो भने रसुवा नाकाको सुन तस्करीको सबै सेटिङ भताभुंग हुने एक प्रहरी अधिकारीले बताए ।
तातोपानी नाकामा तस्करका रुपमा चिनिएका गोवर्द्धन श्रेष्ठको काठमाडौंको टोखा जाने बाटोमा रहेको ठूलो आलिशान महल सुन तस्करी गरेकै पैसाले आत्मारामले खरिद गरेका छन् ।
तस्करीको सेटिङ मिलाउने सुमन उक्त घरमा बसेर केरुङ नाकाबाट काम गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरुले भुटान नाकालाई पनि प्रयोग गरी सुन तस्करीको सेटिंग मिलाएका थिए । व्यापारकै शिलशिलामा भुटान पुगेका आत्मारामको ३५ किलो सुन एक व्यक्तिले खाइदिएपछि उनीहरुले केरुङ नाकालाई रोजेर काम गरिरहेको स्रोतको भनाई छ ।
अहिले बजारमा हुने हुण्डी र डलरको कारोवारमध्ये झण्डै ३५ प्रतिशत कारोवार र चाइनाको हुण्डीको कारोवारमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत कारोवार प्रदीप सरिया र बच्चु पौडेलको समूहले गर्दै आएको छ ।
मीनबहादुर श्रेष्ठले भने तस्करी गरेकै पैसाले चाइनाको ग्वाङ्जोमा नेपाली खानाको होटल सञ्चालन गरेका छन् । उनका दुई छोराहरू पनि ग्वाङ्जोमा नै बस्दछन् भने उनका भाई आत्मारामले भुटानको रुट प्रयोग गर्न अझै छाडेका छैनन् । आत्मारामले श्रीमानसँग विछोड भएकी भुटानी महिलालाई गर्ल फ्रेण्ड बनाई उनैसँग भुटानको फिन्चुलिङमा बसेर कारोबार गर्दै आएको स्रोतको भनाई छ ।
उनीहरूले ल्हासाबाट भुटान हुँदै सुनको तस्करी गर्दछन् । तस्करीकै शिलशिलामा आत्माराम र सुमनले भुटानको चुलिङमा समेत आफ्नो बस्ने ठाउँको व्यवस्था गरेका छन् । यसरी भुटान भित्रिएको तस्करीको सुन चुलिङमा हात परेपछि यिनीहरुले माग अनुसार नेपालका अलवा सिलगुडी, सिक्किमलगायतका भारतका सहरहरूमा पठाउने समेत गर्छन् ।
अहिले उनीहरूले तातोपानी नाका नखुल्दासम्मको अवस्थामा भुटानको नाका र केरुङलाई मुख्य केन्द्रविन्दु बनाएर सुन तस्करी गर्दै आइरहेका छन् । अधिकांश समय काठमाडौंमै रहने नारायण पौडेलकै डिजाइनमा उनीहरुले सुन, डलर र हुण्डीको कारोबार गर्दै आएका छन् ।
कृत्रिम लिंग प्रयोग गरी महिलाद्वारा महिला नै बलात्कृत
807 Views २८ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कानुनी इतिहासमा पहिलोपटक महिलाबाट महिला बलात्कार हुनसक्ने नजिर प्रतिपादन गरेको छ। अनौठो तथ्यसहित जिल्ला अदालत सङ्खुवासभा हुँदै सर्वोच्चसम्म पुनरावेदन भएको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले फौजदारी विधिशास्त्रमा नयाँ आयाम थपेको हो।
नेपाल सरकार वादी भई लाक्पा शेर्पाविरुद्ध दायर उक्त मुद्दामा प्रतिवादीले परिचय लुकाई कृत्रिम लिङ्ग प्रयोग गरी प्रेमिका बनाएकी बालिकालाई बलात्कार गरेको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ। अदालतको ठहर अनुसार प्रतिवादी लाक्पा शेर्पालाई सात वर्ष कैद सजाय पनि सर्वोच्चले सुनाएको छ।
संयुक्त इजलासले मुलुकी ऐनसँगै लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२ ले महिलाबाट महिला बलात्कार हुनसक्ने अवस्था रहेको व्याख्या गरेको हो। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
फोनबाटै चिनजान भएका लाक्पा (अजय) र यमुना (नाम परिर्वतन) प्रेममा थिए। प्रेम सम्बन्ध अगाडि बढ्दै गएपछि दुवै जना विवाहको तयारीमा थिए। दुवैको सल्लाह अनुसार २०६७ फागुन २२ गते लाक्पा प्रेमिका भेट्न मोरङबाट सङ्खुवासभा पुगेका थिए। लाक्पा र यमुनाको योजना अनुसार नै विवाहको योजना अगाडि बढेको थियो।
भोलिपल्ट समाजमा कुरा चल्यो यमुनाको प्रेमी केटा हैन केटी हो। सुरुमा पत्यार नभए पनि लाक्पाको शरीर परीक्षण भयो। शरीर परीक्षणमा लाक्पा केटी भएको प्रमाणित भएपछि उनीविरुद्ध जबर्जस्ती करणी र मानव बेचबिखनमा मुद्दा चल्यो।
578 Views काठमाडौं, २७ पुस । आज पदमुक्त भएका राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणको नतिजा एकपछि अर्कै गर्दै आइरहेका बेलामा सरकारले आफूलाई पदबाट हटाएकामा आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
प्रेममा तगारो बनेपछि श्रीमानको हत्या
990 Views २७ पुस, रौतहट । रौतहटको करुनिया २ का अभिनन्दन साहको हत्या उनकै श्रीमतीले गराएको खुलेको छ । र, प्रहरीले साही पत्नी सकुन्तला देवी र अर्का एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ ।
कतारमा रोजगारी गरेर एक महिनाअघि मात्र घर फर्किएका २३ वर्षीय साहको २१ पुसमा घाँटी रेटेर हत्या भएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा सकुन्तलाले प्रेमीसँग मिलेर श्रीमानको हत्या गरेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।
अभिनन्दन विदेशमा रहेका बेला सकुन्तला र नातामा मृतकको भाइ पर्ने मनिषकुमार सुमन प्रेममा परिसकेका थिए । उनीहरुबीच दुई वर्षअघि मोबाइल फोनमार्फत सम्वन्ध गाँसिएको थियो ।
अभिनन्दन घर फर्किएपछि खटपट सुरु भयो । र, सकुन्तला र मनिषको प्रेममा अवरोध भयो । अभिनन्दनले श्रीमतीमाथि शंका गर्दै मोबाइल खोसे ।
उनले आफ्नो श्रीमतीको मोबाइलमा बारम्बार फोन आउने नम्बर देखाउँदै कसको हो पत्ता लगाइदिन तिनै मनिषलाई भने जो पत्नीको प्रेमी थिए । यसले पतिले आफूमाथि शंका गरेको सकुन्तलाले सहजै थाहा पाइन् ।
र, प्रेमीसँग मिलेर पतिको हत्या गर्ने योजना बनाइन् । ‘हामी दुई वर्षदेखि प्रेममा थियौं तर, अभिनन्दन घर फर्किएपछि शंका लागेर सकुन्तलाको मोबाइल पनि खोस्यो र कुटपिट समेत गरेपछि सकुन्तला ले नै अब अभिनन्दनलाई मार्नु पर्छ भनेकी थिइन्,’ मनिषले प्रहरीसामू भनेका छन् ।
प्रेमिकासँगको योजना अनुसार २१ गते गाउँकै कामदेही खोला नजिकको सिसौको घारीमा लगेर मनिषले अभिनन्दनको हत्या गरेका छन् । नातामा काकाको छोरा पर्ने मनिषले नम्बर पत्ता लगाइदिने भन्दै सिसौ घारीमा लगेर पछाडिबाट रडले टाउकोमा प्रहार गरे र बेहोस भएपछि घाँटी रेटेर हत्या गरे ।
‘प्रेम सम्वन्धमा बाधा उत्पन्न भएपछि र श्रीमानलाई श्रीमतीप्रति शंका हुन थालेपछि सकुन्तलाले नै पतिको हत्या गराएकी हुन्,’ रौतहटका प्रहरी प्रमुख एसपी यज्ञविनोद पोखरेलले भनेका छन् ।
प्रहरीले हत्यामा प्रयोग भएको रड र चक्कुका साथै मोबाइल बरामद गरेको छ । पक्राउ परेका दुवैलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा म्याद थप गरेर हिरासतमा राखिएको प्रहरी उपरिक्षक पोखरेलले बताए ।
जहाँ पानी सापटी मागेर बिरामीलाई औषधि खुवाइन्छ
222 Views २७ पुस, काठमाडौं । काभ्रेको कोशीपारि क्षेत्रमा पर्ने माझीफेदा स्वास्थ्य चौकीमा पानीको चरम हाहाकार छ । जहाँ विरामीलाई औषधि खुवाउँदा पनि पानी सापटी माग्नु पर्ने स्थिति छ ।
स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज उमेश ढकालले सेवाग्राहीको भन्दापनि बिहान बेलुकी खानेपानीको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले सताउने गरेको बताए ।
१२ वर्षअघि जनश्रमदानबाट निर्माण गरिएको स्वास्थ्य चौकीमा अझैसम्म पानीको व्यवस्था हुन सुकेको छैन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
पानी नभएका कारण स्वास्थ्य चौकीमा चेकजाँच गर्न आएका विरामीलाई पानी खुवाउन नसकिएको उनले बताए ।
पानी अभावका कारण शौच गर्न समेत झाडीतिर जानु पर्ने वाध्यता रहेको ढकालको अनुभव छ ।
स्वस्थ्य चौकीमा कार्यालय सहयोगीसहित ६ जनाको दरबन्दी छ । तर, अहिले तीनजना मात्र कार्यरत छन् । भएका कर्मचारी पनि पानी बोक्न टाढाटाढा जानु पर्ने भएपछि झनै अप्ठेरो भएको उनीहरुको भनाई छ ।
साँझ परेपछि क्रिसमसको विदा दिने गृहमन्त्रालय पृथ्वी जयन्तीमा बोलेन प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुँदाहुँदै गृहमन्त्रीलाई कसले रोक्यो ?
387 Views २६ पुस, काठमाडौं । मंगलबार बेलुकासम्म धेरै नेपालीहरुलाई लागेको थियो, नेपालको एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको जन्म दिनमा पुस २७ गते सरकारी विदाको घोषणा हुनेछ ।
तर, मंगलबार साँझसम्म गृहमन्त्रालय कानमा तेल हालेर सुतेपछि अब पौष २७ मा सरकारी विदा नहुने निश्चित भएको छ ।
सरकारको क्यालेण्डरमा क्रिश्चिनहरुको महान चाड क्रिसमस डेमा राष्ट्रिय विदा उल्लेख गरिएको थिएन । क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरुले उक्त दिन क्रिश्चियन धर्मावलम्बीका लागिमात्रै नभएर सबैका लागि विदा दिन दबाव दिएको थियो ।
अन्ततः क्रिसमसको अघिल्लो दिन साँझ पर्नै लाग्दा गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक विदाको घोषणा गरेको थियो । यसरी विदा दिनका लागि क्याबिनेट पनि बसेन र गृहमन्त्रीबाटै निर्णय भयो ।
तर, पृथ्वीजयन्तीमा सरकारी विदा घोषणा गर्नका लागि भने सरकारले निकै ठूलो कञ्जुस्याइँ गर्‍यो । क्रिश्चियनहरु भन्दा पनि ठूलो संख्यामा नेपालीहरु पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय एकताका प्रतीक मान्छन् र उक्त दिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रुपमा मनाइनुपर्ने आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । तर, क्रिश्चियनको मागलाई सम्बोधन गर्ने सरकारले एएटा ठूलो समुदायको भावनालाई बेवास्ता गर्‍यो ।
प्रधानमन्त्रीको निरीह अभिव्यक्ति
यसैवीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा भाषण गर्ने क्रममा पृथ्वीजयन्तीमा सरकारी विदा दिनेबारे आफू सकारात्मक रहेको बताए । नेपाल एकीकरणको जस पृथ्वीनारायणलाई नै जाने भन्दै उनले नेपाल एकीकरणकर्ताको प्रशंसासमेत गरे ।
तैपनि विदा घोषणा गर्न आफूले मात्रै नसक्ने र यसका लागि सहमति हुनुपर्ने भन्दै मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीले लाचारी प्रकट गरे ।
पृथ्वी जयन्तीमा सरकारी विदा दिन आफू सकारात्मक रहे पनि निर्णय गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनौठो छ ।
क्रिसमसमा सरकारी विदा दिन गृहन्त्रालयले नै रातारात वक्तव्य निकाल्न सक्ने तर पृथ्वी जयन्तीमा प्रधानमन्त्रीले नै चाहेर पनि विदा दिन नसक्ने अभिव्यक्ति आउनुलाई धेरैले आश्चर्यका रुपमा लिएका छन् ।
यसबारे गृहमन्त्रालय स्रोत भन्छ- ‘प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवस्थामा विदा दिन नसक्ने भन्ने हुँदैन । क्रिसमसमा जस्तै गृहमन्त्री आफैंले चाहेको भए पनि विदा घोषणा गर्न सक्थ्यो । तर, मंगलबार साँझसम्म गृहमन्त्रालय मौन बसेकाले अब बुधबार सरकारी विदा घोषणा हुने सम्भावना लगभग टरेको छ ।’
सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न- मुखर्जी आउँदा विदा, पृथ्वीजयन्तीमा किन ?
मंगलबार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल आउँदा सरकारले सार्वजनिक विदा दिएकोमा आलोचना गर्नेहरु प्रशस्तै थिए । मुखर्जी आउँदा सरकारी विदा घोषणा गर्ने प्रचण्ड सरकारले पृथ्वी जयन्तीमा सरकारी विदा नदिने निर्णय गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नेहरु पनि देखिएका छन् ।
पृथ्वी जयन्तीमा सरकारी विदा दिइनुपर्ने माग गर्नेहरुमा राप्रपा समर्थकहरुमात्रै होइन, कांग्रेस र एमाले निकट जनमानस पनि देखिएको छ ।
राप्रपाले चियापान गर्ने
यसैवीच कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा बुधबार दिउँसो भृकुटीमण्डपमा चियापान समारोह आयोजना गर्ने भएको छ ।
दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्मका लागि आयोजना गरिएको चियापानमा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई समेत बोलाइएको राप्रपाले जनाएको छ ।
राप्रपाले प्रत्येक वर्ष पृथ्वीजयन्तीको अवसरमा चियापान समारोह आयोजना गर्दै आएको छ ।
पृथ्वीनारायण शाहमाथि बहस
पृथ्वीनारायण शाहको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने प्रचलन रहँदै आएकोमा गणतन्त्र आएपछि सरकारले विदा दिने प्रचलन हटाएको हो । गणतन्त्रमा राजा महाराजका नाममा विदा दिने प्रचलन अनुपयुक्त भएकाले विदा कटौती गरिएको सरकारी पक्षको तर्क छ ।
अर्कोतर्फ कतिपय मधेसी, आदिवासी-जनजाति समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माताका रुपमै स्वीकार्न हिच्किचाउँछन् । उनीहरु पृथ्वीनारायणले बलपूर्वक खस राज्यको स्थापना गरेको र अन्य जातिलाई दमन गरेको हुनाले उनलाई राष्ट्र निर्माता हैन कि साम्राज्यवादी एवं दमनकारी व्यक्तिका रुपमा लिने गर्छन् ।
मधेसमा पनि विखण्डनबारी सिके राउतले यस्तो विचार राख्छन् । र, कतिपय मधेसी मोर्चाका नेताहरु पनि सिके राउतकै विचारलाई अन्धसमर्थन गर्दै पृथ्वीनारायणको निन्दा गर्ने गर्छन् ।
‘विदा दिनुमात्रै सम्मान होइन’
त्यसो त केही मानिसहरुको तर्क के पनि छ भने पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र निर्माता नै हुन् । उनलाई सम्मान पनि गर्नुपर्छ र राष्ट्रले सम्झनु पनि पर्छ । तर, यसका लागि सरकारी विदा नै दिनु सही तरिका होइन । बरु अन्य कृष्णजन्माष्टमी इत्यादिमा दिइने विदाहरुसमेत कटौती गर्ने बाटो अपनाउनुपर्छ भनेर अभिमत राख्नेहरु पनि पाइएका छन् ।
राजेन्द्र महतोलाई १०१ किलोको फूलको माला
656 Views २६ पुस, पर्सा ।
सदभावना पार्टीकाअध्यक्ष राजेन्द्र महतोले हिमाल ,पहाड र तराईमा शोषण र विभेदमा परेका जनताहरुको अवाजहरुलाई उठाउन पत्रकारहरुलाईआग्रह गरेका छन् । सदभावना पार्टी निकट प्रेस मंचनेपालको प्रथम केन्द्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै महतोले मधेस र मधेसी जनताहरुको समस्या र हकअधिकार सुनिश्चित गराउन सम्पुर्ण पत्रकारहरु एक जुट भई कलम चलाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । सो अवसरमा महतोलाई १०१ किलोको फूलको मालाले स्वागत गरिएको थियो ।
देश बिकासमा पत्रकारहरुको भुमिका महत्वपुर्ण भएकोले स्वतन्त्र,निर्भिक र ईमान्दारीपुर्वक कलम चलाउन महतोले पत्रकारहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सह-अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण, बरिष्ठउपाध्यक्ष नवलकिसोर साह, महासचिव मनिष सुमन, सह महासचिव सुरेन्द्र कुर्मी, अजयगुप्ता,अर्जुन उपेत्री, केन्द्रिय सदस्य योगेन्द्र यादव, भुपेन्द्र महतो, निजामुदिन समानी, उद्योगपति अशोक बैद्य, नागरिक अगुवा डा. दिपकशाक्य, नेपालपत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष श्याम बन्जारा, लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रम संतोष पटेलको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो ।
ओलीले भने, ‘मेलै नै संसदको अवरोध हटाएको हुँ’
347 Views २६ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफैंले संसदको अवरोध हटाएको खुलासा गरेका छन् ।
गृह जिल्ला झापाको दमकमा आकाशे पुलको उद्घाटन गर्दै उनले यो खुलासा गरेका हुन् । एमालेका नेताहरुले जालझेल र षड्यन्त्रपूर्वक झुक्काएर संविधान संसोधन विधयेक टेबल गरिएको भनिरहेका बेला ओलीले भने, ‘धेरै कचकच, जालझेल र षड्यन्त्र भएकाले म आफैंले अवरोध हटाएको हूँ तर संसोधन प्रस्ताव कुनै हालतमा पारित हुन दिइन्न ।’ प्रतिपक्षीको नारा जुलुस र होहल्लाका बीच सरकारले संविधान संसोधन विधयेक संसदमा पेश गरेको थियो ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग एक घण्टा छलफल गरेपछि सहमतिमै वियधेक टेबल गरिएको बताएका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले हिमाल, पहाड र तराईमा मिलेर बसेका जनतालाई संविधान संशोधन गरेर अलग्याउन खोजेर देश बिखण्डन गर्न खोजिएको आरोप लगाए ।
तत्काल तीनै तहको निर्वाचन गरेर संविधानको कार्यन्वयन तर्फ लाग्नु पर्नेमा ओलीले जोड दिए । उनले भने, ‘निर्वाचन जरुरी छ, त्यसपछि अहिले सत्तामा बसेकाहरुको हालत प्रष्ट हुन्छ, त्यसपछि एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्छ ।’
483 Views २६ पुस, काठमाडौं । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहाले आफू दरबारबाट बाहिरिएपनि जिम्मेबारीबाट नबाहिरिएको बताएका छन् ।
पृथ्वी जयन्तीको पूर्व सन्ध्यामा वक्तव्य जारी गर्दै उनले भनेका छन् ‘स्मरणीय छ, नेपाली जनताको इच्छा नै राजइच्छा हुने परम्परा रही आएको यस मुलुकमा तत्कालिक परिस्थिति समेतलाई दृष्टिगत गरी हामी नारायणहिटी राजदरबारबाट बाहिरिएका हौं । तर जनता र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीबाट पन्छिएको महसुस हामीले कहिल्यै गरेका छैनौं र गर्ने पनि छैनौं ।’
विश्वमा राष्ट्रवादी भावनाको जागरण आउँदै गरेको वर्तमान सन्दर्भमा हामी भने राष्ट्रको अस्तित्वमाथि नै आँच पुग्ने व्यवहार प्रस्तुत गर्दैछौं । यस्तो दुःखद र विडम्वनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुनै पर्दछ । उनले भनेका छन्, राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको वंशजका एक नेपाली हुनुका नाताले नेपालको अस्तित्व, स्वाभिमान र गौरव चिरकालसम्म जोगाउन, नेपालीबीचको एकतालाई जीवन्त र स्थायी बनाउन, स्थिर, शान्त र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय झण्डा मुनि गोलवद्ध हुन आह्वान गर्दछु ।
पूर्वराजाले जारी गरेको वक्तव्यको पूर्णपाठ
चारवर्ण छत्तीस जातको साझा फुलवारीको रूपमा रहेको यस मुलुकका शान्तिपि्रय जनताबीचको एकता विथोल्ने, देशको सार्वभौमसत्ता कमजोर पार्ने, राज्य संयन्त्रहरूलाई दुर्वल तुल्याउने, भौगोलिक एवं क्षेत्रीय अखण्डतामाथि प्रहार गर्ने कार्यमा जो जसले विषारोपण गरेको भए तापनि तिनले नेपाल र नेपाली विरुद्ध अक्षम्य अपराध गरेका छन् ।
बिजुलीमा लगानीको होडबाजी, २४ घण्टामै ५७ करोड ! सरकारले आवेदन मागेको भोलिपल्टै ९ हजार नेपाली जुटे
471 Views २६ पुस, काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत आयोजनामा स्वदेशी लगानीका लागि अनलाइनबाट आवेदन लिन सुरु गरेको २४ घण्टामै ५७ करोडको प्रतिवद्धता आएको छ ।
Page4of 230« First...«23456	»	102030...Last »	Recent Posts